Fake news: Gọv Obianọ agọọla na akụkọ na onye ọrụ atụnyereghị Buhari a chụọ ya n'ọrụ bụ ụgha - BBC News Ìgbò
Fake news: Gọv Obianọ agọọla na akụkọ na onye ọrụ atụnyereghị Buhari a chụọ ya n'ọrụ bụ ụgha
20 Febụwarị 2019
Ebe foto si, GovernorObianoFacebook
Obiano meriri na ntuliaka ha mere n'afọ 2017 we bụrụkwa gọvanọ nke ugboro abụọ
Gọọmentị Anambara agọọla na onweghị mgbe gọvanọ steeti ahụ bụ Willie Obiano nyere iwu ka ndị ọrụ oyibo na ndị Anambara tụnyere Buhari vootu na ntuliaka na-abịa.
Akụkọ wusara na soshal midia nakwa steeti ahụ ụbọchị Wenezde bụ na Obiano nyere ndị ọrụ bekee niile iwu site na akwụkwọ ozi 'Memo', ka ha tụnyere Buhari vootu na Satọde ma ọ bụghị otu a, a chụọ ha n'ọrụ.
Na mkparịtaụka ya na BBC Igbo na Don Adinuba bụ Kọmishọna na-ahụ maka mgbasaozi nakwa nkuzi nyere ọha na eze na steeti ahụ nwere n' ekwentị, o kwuru na ya bụ akụkọ a na-akọ bụ ozi adigboroja nke Bekee kpọrọ, 'Fake News.'
Ọ boro ebubo na ya bụ akụkọ asị bụ onye okwupụta okwu nyere Maazi Pita Obi, bụ Valentine Obienyem' bụ ya bidoro ya bụ akụkọ, gbakwunyere na-enweghị mgbe ọbụla Gọvanọ Obiano ji akọ akụkọ asị banyere Pita Obi dị ana-akọ na akwụkwọ akụkọ dị icheiche, nakwa na ìgwè nzikọrita ozi ohaneze bụ ịntanetị.
2019: Inec ewepụtala ọnụọgụgụ ndị denyere aha nakwa ndị natara PVC
N'ozi ha wepụtara na Twitter, Inec wepụtara ọnụọgụgụ ndị denyere aha maka ntụlịaka 2019 nakwa ndị natara PVC.
Ihe karịrị nde mmadụ iri asatọ denyere aha, ebe nde irir asaa na ụma wetara PVC ha.
Tụọ vootu,atụfula ike gị site na ịnọrọ n'ụlọ-Atiku
Ebe foto si, @Atiku
Atiku Abubakar bụ onye na-azọ ọkwa onyeisiala n'aha PDP na ntuliaka 2019 arịọla ụmụ Naijiria do,do,do pụta n'igwe tụọ vootu na Satode na-abịa.
Atiku onye kwuru nke a ụbọchị Tọọzde n'okwu ọ gbasara n'igwe okwu soshal midia kwuru na ihe onye apụtaghị na-ekwu bụ na etu ala Naijiria dị ugbua dị ya mma n'ahụ.
Ebonyị ehiwela kọmịti ga-enyocha ọdachi Izzi
Ebonyi steeti ehiwela kọmịti ga-elebanye anya n'ebe mmiri si banye opi ụgbọghụrụ n' ọgbaghara butere ọkụ gbara ụlọ iri atọ n'Izzi nke onyenchikota ya bụ Rev. Abraham Nwali.
Gọvanọ Umahi, onye gbara nke a n'anwụ ụbọchị Tọọzde ka ọ na-agwa ndị ntaakụkọ okwu n'Abakaliki kwere nkwa na ya ga-emeziri ndi e mebiri ihe ha ihe emebiri ma ya merie ntuliaka a.
Onye ihe Man.City na-amasị merụrụ nnukwu ahụ
Ndị otu Schalke nọ mba Germany
Otu onye ihe otu egwuregwu Manchester City na-amasị bụ ony n'ezi ọnọdụ ọjoo n'ụlọogwụ ka ebichara ya aka n' asọmpi Champions League ha na Schalke na Germany ụbọchị Wednezde.
Ebe foto si, Eunice Atuejide
Akụkọ na-eru anyị ntị kwuru na Atuejide awụsala ngwa ọrụ ndọrọndọrọ ya.
O kwuru nke a n'akwụkị̀ọ ozi o sitere BBC Igbo n'ekwentị na-akọwa na ihe dị ya mkpa bụ na o bu ala Naịjirịa n'uche ya.
Nigeria Election 2019: Ụmụnwaanyi chọrọ ịnapụ Buhari ọrụ ya
Cheta na Oby Ezekwesili bụ nwaanyị ọzọ na-azọ ọkwa onyeisiala chịsara ngwa ọrụ n'izuụka ole na ole gaara aga.
Anambra Governorship Election: Soludo emeriela na ntuliaka imeụlọ otu APGA
23 Juun 2021
Vidio, E tu m siri si n'ịgba bọọlụ ogbe gbawara Rangers nakwa mba ụwa bọọlụ - Emmanuel Okala
Vidio, Ndị Owerre Ezukala kwenyere na Chukwu biri n'ime Ogbaukwu Cave n'oge gboo, Duration 5,28
19 Juun 2021
Vidio, Tupu inye mmadụ ọbara, buru ihe ndị a n'obi, Duration 4,38
15 Juun 2021
Gịnị bụdị nsogbu 'ovarian cyst' ụmụnwaaanyị kpụzị n'ọnụ ugbua
5 Juun 2021
Vidio, O nwere uru dị n'ime ajụ Mbaise ?, Duration 3,14
12 Juun 2021
Etu ndị uweojii siri nwuchie ndị ha sị bụ ndị ESN/Ipob n'Ebonyi
'Ihe ga-eme ka m gbaghara MNK ma nabatakwa ya dịka nwa m' - Uwazurike
'Onye uweojii gbagburu di m anapụla mụ na ụmụ anọ anya anyị ji ahụ ụzọ'- Nwaanyị agbagburu di ya
Ihe ndị na-achọ Biafra sara ndị ugwu kwuru na ha bụ aka ji akụ Naịjirịa
Biafra secession : Ụjọ ndị Ugwu na-atụ ndị gọvanọ Ọwụwa Anyanwụ - Ohaneze Youth Council
Egwu anọ e ji mara ndị Igbo
Emelitere ikpeazụ na: 1 Septemba 2019
Ihe mere anyị ji gbaa ndi na-eme ngaghariwe egbe ose anya ụnyahụ- ndị uweojii
Nnewi, Awka na obodo ndi ọzọ nwere anụmanụ ha na-akwanyere ugwu
Emelitere ikpeazụ na: 7 Disemba 2019